🥇 ▷ Android ama iPhone? Khariidadan ayaa ku tusi doonta midka ugu caansan CDMX ✅
Android ama iPhone? Khariidadan ayaa ku tusi doonta midka ugu caansan CDMX
Waxay lamid tahay khilaafaadka sida Coca Cola ama Pepsi inay ka fiican yihiin, ama haddii telefishanka qalabka Bluetooth-ka ka fiican yahay kuwa caadiga ah, waxaad ogaan kartaa haddii Android ama iPhone ay ka fiican yihiin. Dabcan, waxaa jira arrimo badan oo yimaada marka laga wada hadlayo kan labadan shirkadood soo bandhigaya aalado ka wanaagsan, wax qabad wanaagsan, qiime ka wanaagsan, in kasta oo marar badan doorbididda mid ama midka kale ay sabab u tahay dhadhan uun. Waxa aan ku ogaan karno (ama xaqiijin karno, maadaama ay u dhowdahay hubaal) khariidadan ayaa ah in Android xaqiiqdiba ay caan ku tahay Mexico City.
Khariidaddan uu sameeyay Sasha Trubetskoy waxay muujineysaa tirada CDMX ee adeegsata Android iyo midka isticmaala iPhone. Dhibco yar yar oo casaan ah waxay matalaan isticmaaleyaasha iPhone, kuwa buluugga ahna waxay matalaan adeegsadayaasha Android. Khariidadan kaliya ma xaqiijineyso waxa laga yaabo inay horeyba u muuqatay, in Android ay aad ugu caan baxday chilangos, laakiin in dadka ku dhow ay aad u kala duwan yihiin. Tani waxay ka dhigan tahay in kasta oo adeegsadayaasha iPhone ay ku urursan yihiin aagagga galbeedka iyo galbeedka magaalada, khariidada inteeda kale waxay ku dhowdahay gebi ahaanba buluug dhibco.
Khariiddada ayaa ah mid xiisa leh oo waxay fursad u siin kartaa indha indheynta kale iyo daraasadaha si isku mid ah looga muuqdo. Haatan waxaan aragnaa oo keliya sida isticmaaleyaasha shirkad kasta loogu qaybiyo dhulka CDMX. Kaliya iska ilaali naftaada.
(Sawirka: Sasha Trubetskoy)
Waxaad ka iibsan kartaa khariidadda qaraarka sare aadna ku taageeri kartaan maamulaha mashruuca xiriiriyaha soo socda.